10 Volana Aty Aoriana, Manao Diabe Manerana an’i Meksika Ireo Fianakaviana, Mitady Ireo Ayotzinapa Mpianatra Tsy Hita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2015 3:09 GMT
Mbola manao diabe indray ireo havana sy mpiara-mianatra amin'ireo 43, 10 volana aty aorian'ny nanjavonan'ireo Ayotzinapa mpianatra. Sary: Francisco Cañedo, SinEmbargo.
Navoaka voalohany tao amin'ny Sin Embargo ito lahatsoratra nosoratan'i Sergio Rincón ito ary naverina nalefa eto ao anatin'ny fifanarahana fiaraha-miasa.
Nilaza ireo havana, mpianatra ary mpikatroka mafana fo fa hisy filaharana karazany roa hamakivaky an'i Meksika avy any avaratra sy atsimo manomboka ny 31 Jolay, mikendry ny hanambatra ny hery sy hiantsoana ny Meksikana misimisy kokoa mba hanjohy ny fitadiavana ireo mpianatra miisa 43 an'ny Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Fianarana ho Mpampianatra any Ambanivohitr'i Raúl Isidro Burgos) any Ayotzinapa, Guerrero.
Nanjavona ny 26 Septambra ny taona lasa tao Iguala ireo mpianatra, lazaina ho teo an-tànan'ny polisy monisipaly.
Hatramin'izay, nanao fanadihadiana ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona teo amin'ny firenena sy maneran-tany, ary nangataka ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Meksika mba hanitatra ny fanadihadiany amin'ireo mpianatra tsy hita, ary hanokatra fanadihadiana vaovao, tafiditra amin'izany ny fiantsoana ireo miaramila mba hijoro ho vavolombelona.
Tokony hadihadiana ny filazan'ireo fianakaviana sy ireo vondrona mpisolovava mitàna ny naha-teo ny miaramila nandritra ny fanjavonana, nefa mandà ny hamela ireo ray aman-dreny Ayotzinapa mpanao fanadihadiana hiditra ireo tobin'ny miaramila ny tafika Meksikana. Milaza ireo mpampanoa lalàna fa ho azy ireo, misy tsy fahampian'ny porofo amin'ny fidiran'ny miaramila, ka tsy ahafahana manohy ny fanadihadiana hatrany amin'io zotra io.
Nanendry vondrona manampahaizana iraisam-pirenena handray anjara amin'ilay fanadihadiana ny Kaomisiônan'ny Fivondronan'ny Amerikana momba ny Zon'olombelona, izay nanao toromarika amin'ny antsipirihany tamin'iny Aprily lasa iny. Na izany aza, tsy nahazo vokany ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona sy ireo manampahaizana.
Tamin'iny herinandro lasa iny, nanasongadina fahadisoana sy fanadinoana maro tamin'ny fanadihadiana ministerialy nataon'ny Lehiben'ny Fampanoavana Meksikana sy Mpampanoa lalàna an'ny Fanjakana Guerrero, ny Kaomisiôna Nasionalin'ny zon'olombelona. Angatahan'i José Larrieta, lehiben'ny sampana manokana amin'ilay Raharaha Iguala, miaraka amin'i Luis Raúl Pérez Gonzáles, Mpanelanelana nasionaly, ireo tompon'andraikitra Meksikana mba hitrandraka zotra vaovao ho hadihadiana .
Ny iray amin'ireo zotra vaovao tokony hanaovana fanadihadiana dia ny hoe, mety nitranga tao Pueblo Viejo sy La Parota (toerana manodidina an'i Iguala) ny fanafihana ireo mpianatra, “satria misy tatitra-nà olona iray voafaritra mazava tsara izay afaka manome loharanom-baovao mifanaraka amin'ny fanjavonan'ireo mpianatra”. Ary nisy koa ireo honohono fisian'ireo olona hafa, fantatra amin'ireo anarany fotsiny, izay mbola tokony hohadihadiana.
An-jatony maro ireo mpanao hetsika tonga teo amin'ny Paseo de la Reforma, làlana iray migodàna izay manapaka ny fon'ny Tanànan'i Meksika, tamin'ny andron'ny fihetsiketsehana, mangataka ny fiverenan'ireo mpianatra velona. Nikarakara hetsika ireo fikambanana sivily sy sendikà, tamin'ny 4 ora hariva, mba hampahatsiahivana ireo manampahefana fa indray andro toy ny androany, 10 volana lasa izay, taorian'ny nitazonan'ny polisin'i Iguala azy ireo, nanjavona ireo mpianatra.
Tonga teo amin'ny Hemiciclo a Juárez, tsangambato natsangana hanomezana voninahitra ny filoha teo aloha Benito Juárez ary hita ao amin'ny ivo manan-tantaran'ny tanànan'i Meksika, ireo mpanao hetsika, izay nanao diabe niaraka tamin'ny fianakavian'ireo 43. Teo, nitaky ny rariny izy ireo, amin'izay mba ho saziana ireo miaramila tafiditra tamin'ilay raharaha Iguala, Tlatlaya ary Ostula. Heno tao amin'ilay hetsika ny hoe “manao famonoana olona ivelan'ny lalàna ny tafika”.
“Namono ankizy lahy iray tao Michoacán ny tafika Meksikana, io tafika io ihany no naka ireo zanakay. Noho izany, mitaky anareo hanokatra ireo toby [miaramila] amin'ireo ekipanà manampahaizana avy any Arzantina izahay”, hoy i Felipe De La Cruz, mpitondra tenin'ny ray aman-drenin'ireo mpianatra.
Nanamarika i De La Cruz fa lasa “lainga manan-tantaran'ny firenena” ny fahamarinana manan-tantaran'ny governemanta.
Nambaran'ilay hetsika izay mitaky ny fitadiavana ireo mpianatra 43 fa ny 31 Jolay, hisy fananganana fitanjozorana roa ho fampahafantarana. Ny iray any amin'ireo firenena avaratra izay hanomboka any Chihuahua, ary iray hafa any atsimon'i Meksika izay hanomboka any Chiapas.
“Maniry ny hitambatra izahay, hanatevina laharana ilay tolona miaraka amin'ireo fikambanana sy fiarahamonina”, hoy izy ireo.
Hihazo ireo firenenan'i Coahuila, Durango, Zacatecas, Guanajuato, ary Jalisco ilay fitanjozorana avy any avaratra. Handalo an'i Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Distrito Federal ilay fitanjozorana avy any atsimo, ary hifarana ao Guerrero.
Nandritra ilay diabe, nilaza ireo ray aman-dreny fa tato anatin'izay 10 volana lasa izay, niaina toy ny tao anatin'ny helo izy ireo, kanefa noho ny fanohanan'ireo Meksikana maro, manana hery entina hivoaka ary hangatahana ny rariny izy ireo “satria tsy afaka mijanona mangiana izahay, ao anatin'ny firenena izay ilazan'ireo manampahefana fa tsy nisy na inona na inona nitranga”, hoy iray amin'ny fianakavian'ireo mpianatra.
Nilaza mazava ihany koa izy ireo fa tsy hamela ny hisian'ny fifidianana ao Iguala, no sady tsy hamela ny hisian'ny hery mitam-piadiana ao amin'ny tanàna.
“Tsy misy fifidianana eo raha tsy vohain'izy ireo ny toby hidiran'ireo manampahaizana”, hoy ny vehivavy iray.
Nialoha ny fidinana an-dalambe sy ny hetsika, nisy diabe an-tongotra nokarakaraina tao amin'ny fanoherana ny tsangambaton'ireo +43, izay nampitandreman'ny havan'ireo fianakaviana fa raha misy zavatra mitranga amin'ireo zanany, ny Filoham-pirenena Enrique Peña Nieto no tompon'andraikitra.
Nanomboka ny 2 Aogositra, tao amin'ny firenenan'i Guerrero, ny andron'ny hetsika amin'ilay 10 volan'ny fanjavonan'ireo mpianatra, miaraka amin'ireo hetsiky ny avara-pianarana, havana, ary mpiara-mianatra tamin'ireo mpianatra.
Ao amin'ny renivohitry ny firenena, nisy velakevitra natao tao amin'ny Hemiciclo a Juárez, izay nitakian'ireo mpanao hetsi-panoherana ny fiverenan'ireo mpiantra velona, ary hahazoan'izy ireo antoka ihany koa ny hampisehoan'ny tatitra vao haingana nataon'ny Kaomisiôna Nasionalin'ny Zon'olombelona fa ny filazàna ofisialy momba ireo hetsika dia mitady ny hifaranan'ny hetsiky ny ray aman-dreny ho fikarohana ireo zanany.
“Ankehitriny mangataka anay hody any an-trano izy ireo, ary ny hamafànay ny alahelonay. Hoy izahay amin'izy ireo: Tsy hody any an-trano izahay mandra-pamerenana ireo zanakay”, hoy i Vidulfo Rosales Sierra, mpisolovava avy ao amin'ny Ivon-toeran'ny Zon'olombelona an'ny Mount Tlachinollan.
Taminà fihetsika hafa fanehoana firaisankina, nisy ireo mpitondra bisikileta nandeha avy tany Hemiciclo a Juárez nankany amin'ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Meksika, niaraka tamin'ireo takelaka fanehoana fanoherana sy sarin'ireo mpianatra 43.